Indlu yaseLwandle kunye neStudio
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguPippa
Indlu elunxwemeni lonxweme lwaseMazantsi, yimizuzu nje embalwa uhamba ukusuka eRennies Beach entle.
Ukuhamba ngokulula ukuya kumbindi we-Ulladulla kunye neevenkile ezininzi kunye neeresityu onokuzijonga. Embindini wazo zonke iidolophu ezikuNxweme loMzantsi kunye neelwandle ezinjengeMilton kunye neMollymook.
Indlu enkulu enezinto eziluncedo zendlu epheleleyo kunye negumbi lokulala eliphambili elinestudiyo esahlukileyo kwiyadi yangasemva enebhedi ephindwe kabini / enye, isekwanebhedi kunye netafile. Ilungele izibini ukuba zibe nendawo yazo okanye indawo yokurhoxa ekwishumi elivisayo.
Indlu enkulu yindlu enegumbi elinye elinekhitshi eligcweleyo, igumbi lokuphumla kunye negumbi lokutyela. Igumbi lokuhlambela lanamhlanje elineshawa kunye nendlu yangasese eyahlukileyo. Umatshini wokuhlamba uyafumaneka.
I-studio ngaphandle kweyadi ngasemva ebekwe kunye neebhedi zebhedi (eyodwa kunye nephindwe kabini) enesofa kunye netafile encinci enezihlalo.
Izinto ezisisiseko eziyimfuneko ekhitshini, kwigumbi lokuhlambela nakwimpahla yokuhlamba zibonelelwe.
Indawo ezolileyo yase-Ulladulla.
Ukuhamba umgama ukuya eRennies beach.
10-15 imizuzu ukuhamba ukuya embindini Ulladulla.
Ujikeleze ikona ukusuka kwiklabhu ye-ex-servicesmens.
Ifumaneka ngefowuni okanye nge-air bnb contact.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-9619